October 2020 - The Moon MM
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ လင်းအောင်ခေတ်တို့နဲ့အတူ အောင်လပွဲကြည့်ရင်း ထိုးကျိတ်နေကြတဲ့ အောင်လေး
October 31, 2020 by Wai Lu
ယောကျာ်းပီသပြီး ခန္ဓာကိုယ်အမိုက်စားလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အောင်လေးကတော့ ယခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါပဲ ။ နိုင်ငံခြားမင်းသားတစ်ယောက်လို့ ထင်မှတ်ရလောက်အောင် ချောမောခန့်ညားတဲ့ အောင်လေးကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာပါ ပါဝင်ရိုက်ကူးသရုပ်ဆောင်နေတာတွေ့မြင်ရမှာပါ ။ အောင်လေးကတော့ ကိုရီးယားမင်သားလေးလို့ ထင်မှတ်ရလောက်အောင် ချောမောခန့်ညားတာကြောင့် မိန်းမလှလေးတွေကြွေနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုမိုအောင်မြင်မှုရရှိလာတဲ့ အောင်လေးက အနုပညာလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များကို သူရဲ့ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖော်ပြလေ့ရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ အမြဲလိုလို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စနောက်ဆေးထိုးကာ အမြဲပျော်ပျော်နေတတ်သူလည်းဖြစ်ရာ အခုလည်း သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ လင်းအောင်ခေတ်တို့နဲ့အတူ အောင်လပွဲကြည့်ရင်း ထိုးကျိတ်နေကြတဲ့ အခွီပုံလေးတွေကိုရိုက်ပြီး စနောက်ကာ ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ် ။ ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး ရယ်နေရသလို တကယ်လားတောင်ထင်ရလောက်အောင်ပီပြင်လွန်းနေတာအမှန်ပါပဲနော် ။ပရိသတ်ကြီးအတွက် အောင်လေးတို့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အခွီပုံလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ။ credit-cele zone ZAWGYI သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ လင္းေအာင္ေခတ္တို႔နဲ႔အတူ ေအာင္လပြဲၾကည့္ရင္း ထိုးက်ိတ္ေနၾကတဲ့ ေအာင္ေလး … Read more
ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ အသက်ရှူစက် (၅) လုံးကိုထပ်မံလှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ပြေတီဦး
အကယ်ဒမီဆုများစွာကို သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့ မင်းသားချော ပြေတီဦးက အနုပညာလောကမှာ ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်လက်အဖြစ် အောင်မြင်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းမြောက်များစွာ ရိုက်ကူးနေရတဲ့ ပြေတီဦးက ဇာတ်ရုပ်နဲ့အံဝင်ဂွံကျဖြစ်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ပြေတီဦးက ပရိသတ်အားပေးမှုတွေရရှိပြီး နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ကျော်ကြားအောင်မြင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ပြေတီဦးရဲ့ ထိမိပြောင်မြောက်လွန်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေက သည်းသည်းလှုပ် အားပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြေတီဦးက အခုချိန်အထိ ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးရင်း အနုပညာအလုပ်တွေကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ကိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းလေးကိုလည်းတည်ထောင်ထားရာ အလှူအတန်းတွေဆိုရင်လည်း ပါဝင်လှူဒါန်းတတ်သူဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း ကိုဗစ်ရောဂါ ကုသတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ အသက်ရှူစက် (၅) လုံးကိုထပ်မံလှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ရာ ပရိသတ်ကြီးလည်း သာဓုခေါ်နိုင်စေရန်မျှခေပေးလိုက်ပါတယ် ။ credit-cele zone ZAWGYI ကိုဗစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ အသက္ရႉစက္ (၅) လုံးကိုထပ္မံလႉဒါန္းလိုက္တဲ့ ေျပတီဦး … Read more
မရောက်ဘူးသေးတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို သွားရောက်ကာ အလှူငွေများနဲ့ ပစ္စည်းတွေလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်သင်းကြည်
ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီခိုင်သင်းကြည်ကတော့ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်သင်းကြည်ကို ပရိသတ်တွေကလည်း အားပေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ စံထိပ်ထားဦးကလည်း မေမေနဲ့အတူ အနုပညာအလုပ်တွေအတူလုပ်ကိုင်ကာ ကြော်ငြာလေးတွေ ရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုအပေါ်မှာ တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ မခိုင်လေးက ချစ်ခင်ပွန်းနဲ့သမီးလေးကို ဂရုစိုက်သလို သူမရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုလည်း ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။မခိုင်လေးက အနုပညာဘက်မှာ ထူးချွန်သလို မိသားစုအတွက်လည်း အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်းတစ်ယောက်ပီသသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အလှူအတန်းတွေဆိုရင်လည်း အမြဲတတ်နိုင်သလောက်ပါဝင်လှူဒါန်းတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း သူမ မရောက်ဘူးသေးတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို သွားရောက်ကာ လက်ဆောင်ရရှိထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေအပြင် အလှူငွေငါးသောင်းစီကိုလည်း ဆွမ်းနဲ့ ဆွမ်းဟင်းအတွက် လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် ။အလှူပုံလေးတွေကြည့်ပြီး ကြည်နူးပီတိဖြစ်မိတာကြောင့် ပရိသတ်ကြီးလည်း သာဓုခေါ်နိုင်စေရန် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ။ credit-cele zone ZAWGYI မေရာက္ဘူးေသးတဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကို သြားေရာက္ကာ အလႉေငြမ်ားနဲ့ ပစၥည္းေတြလွူဒါန္းခဲ့တဲ့ … Read more
မိခင်ကိုကိုယ်တိုင်ကန်တော့ဖို့ ဘန်ကောက်ကနေရန်ကုန်ကို ပြန်လာခဲ့ပေမယ့် Quarantine ဝင်နေရလို့ အွန်းလိုင်းကပဲကန်တော့ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အိမ့်ချစ်
ပရိသတ်တော်အိမ့်ချစ်ကတော့ ချစ်သူနဲ့အတူလက်ထပ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမှမိခင်ဖြစ်သူကိုသတိရလို့ရန်ကုန်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ မိခင်ကိုသီတင်းကျွတ်အမှီကန်တော့ချင်ခဲ့ပေမယ့် ပြင်ပနိုင်ငံကဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တာကြောင့် Quarantineဝင်နေရှာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်းအိမ့်ချစ်ဟာ မိခင်ဖြစ်သူကိုအွန်လိုင်းကနေပဲကန်တော့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။မိခင်ကိုအွန်လိုင်းကနေပဲ ကန်တော့ခွင့်ရခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်မကန်တော့နိုင်ခဲ့လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြောင့်အိမ့်ချစ်က သူမရဲ့လူမှုကွန်ရ်စာမျက်နှာကနေယခုလိုပဲရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။”မေမေ့ကို ကိုယ်တိုင်ကန်တော့ဖို့ ဘန်ကောက်ကနေရန်ကုန်ကို ပြန်တော့လာတာပဲ ဒါပေမယ်အခုQuarantineဝင်နေရတော့ သီတင်းကျွတ်အမီကန်တော့လို့မရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ”ဆိုပြီးရေးသားကားရင်ဖွင့်ထားခဲ့တာကို ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ Source:Eint Chit Zawgyi မိခင္ကိုကိုယ္တိုင္ကန္ေတာ့ဖို့ ဘန္ေကာက္ကေနရန္ကုန္ကို ျပန္လာခဲ့ေပမယ့္ Quarantine ဝင္ေနရလို႔ အြန္းလိုင္းကပဲကန္ေတာ့ခြင့္ရခဲ့တဲ့ အိမ့္ခ်စ္ ပရိသတ္ေတာ္အိမ့္ခ်စ္ကေတာ့ ခ်စ္သူနဲ႔အတူလက္ထပ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာေနထိုင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ကမွမိခင္ျဖစ္သူကိုသတိရလို႔ရန္ကုန္ကိုျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ မိခင္ကိုသီတင္းကြၽတ္အမွီကန္ေတာ့ခ်င္ခဲ့ေပမယ့္ ျပင္ပႏိုင္ငံကဝင္ေရာက္လာတာျဖစ္တာေၾကာင့္ Quarantineဝင္​ေန႐ွာပါတယ္။ ဒါ့​ေၾကာင့္လည္းအိမ့္ခ်စ္ဟာ မိခင္ျဖစ္သူကိုအြန္လိုင္းက​ေနပဲကန္​ေတာ့ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။မိခင္ကိုအြန္လိုင္းက​ေနပဲ ကန္ေတာ့ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ကိုယ္တိုင္မကန္ေတာ့ႏိုင္ခဲ့လို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနေၾကာင့္အိမ့္ခ်စ္က သူမရဲ႕လူမႈကြန္ရ္စာမ်က္ႏွာကေနယခုလိုပဲရင္ဖြင့္လာခဲ့ပါတယ္။”ေမေမ့ကို ကိုယ္တိုင္ကန္ေတာ့ဖို့ ဘန္ေကာက္ကေနရန္ကုန္ကို ျပန္ေတာ့လာတာပဲ ဒါေပမယ္အခုQuarantineဝင္ေနရေတာ့ သီတင္းကၽြတ္အမီကန္ေတာ့လို့မရလို့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနတာ”ဆိုၿပီးေရးသားကားရင္ဖြင့္ထားခဲ့တာကို ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။
အရမ်းကိုလိုက်ဖက်ပြီး ကြည်နူးအားကျစရာကောင်းလွန်းတဲ့ Pre Wedding ပုံလေးတွေမျှဝေပေးလိုက်တဲ့ ခင်လွှမ်း
October 31, 2020 October 31, 2020 by Wai Lu
ကျစ်လစ်တောင့်တင်းပြီး လှပတဲ့ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ခင်လွှမ်းကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဆွဲမက်ဖွယ်ရင်သပ်ရှုမောစရာ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ရင်ကို ဆွဲဆောင်ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူ လှပကြည်လင်တဲ့ အသားအရေကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး sexy ကျတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ချစ်သူစည်ဖြိုးနဲ့အတူ သာယာအေးချမ်းတဲ့ အချစ်ရေးလေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပြီး စည်ဖြိုးကလည်း အရမ်းဂရုစိုက်ပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ အပြည့်အဝပေးထားတာကြောင့် ပရိသတ်တွေ အားကျနေရတဲ့ ဆယ်လီစုံတွဲလေးလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ မထင်မှတ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရပြီဖြစ်တာကြောင့် အမြန်ဆုံးမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ စီစဉ်နေတာဖြစ်ပြီး Pre Wedding လည်းရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်ပါတယ် ။ အခုမှာတော့ မြင်သူတိုင်း အားကျရလောက်အောင် ရိုမန့်တစ်ဆန်လွန်းတဲ့ pre wedding ပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် ။ပုံလေးတွေတိုင်းမှာ အရမ်းကိုလိုက်ဖက်ပြီး ကြည်နူးအားကျစရာကောင်းလွန်းကာ မိမိုက်နေတာကြောင့် ပရိသတ်ကြီးလည်း ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် … Read more
အစ်မတစ်ယောက်လိုသဘောထားပြီး သီတင်းကျွတ်လာကန်တော့ကြတဲ့ ချယ်ရီသင်းနဲ့မိဖူးတို့ကြောင့်ပီတိဖြစ်နေရတဲ့ ပိုပို
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်ပိုပိုကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးနဲ့အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်။ သူမကတော့အောင်မြင်နေတဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် တက်သစ်စအနုပညာရှင်လေးတွေကိုလည်း မောင်နှမအရင်းလိုလက်တွဲခေါ်ယူတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။ ပိုပိုကတော့ဘာသာတရားကိုလည်းကိုင်းရှိုင်းသလို အလှူတွေလည်းမကြာခဏပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။ သူမကတော့ဒီနေ့သတင်းကျွတ်လပြည့်နေလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှောက်မှာ မဟာသမယသုတ်နဲ့ဓမ္မစင်္ကြာရွတ်ဖတ်ပူပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီနေ့လေးမှာပဲ အစ်မအရင်းတစ်ယောက်လိုရိုရိုသေနဲ့လာရောက်ကန်တော့ကြတဲ့ အဆိုတော်ချယ်ရီသင်းနဲ့မိဖူးတို့ကြောင့်ကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေရကြောင်းသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပုံရိပ်တေ ွနဲ့အတူဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပုံရိပ်လေးတွေကိုတော့ “ချစ်ညီမချယ်ရီသင်းနဲ့ မိဖူးတို့က လာကန်တော့တာတဲ့သူ့အမကို လိုအင်ဆန္ဒများအားလုံးပြည့်စုံပြည့်ဝပါစေရှင့် မနှစ်က L ဇာတာကြည်ဖြူ ဒီနှစ်ချယ်ရီနဲ့မိဖူး(ဪ ကန်တော့ခံအရွယ်ရောက်ပြီ)”ရေးသားကာဖော်ပြပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Source:ဝတ် ရည် မိုး Zawgyi အစ္မတစ္ေယာက္လိုသေဘာထားၿပီး သီတင္းကြၽတ္လာကန္ေတာ့ၾကတဲ့ ခ်ယ္ရီသင္းနဲ႔မိဖူးတို႔ေၾကာင့္ပီတိျဖစ္ေနရတဲ့ ပိုပို ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ အဆိုေတာ္ပိုပိုကိုေတာ့ ပရိသတ္ႀကီးနဲ႔အထူးမိတ္ဆက္ေပးစရာမလိုေတာ့ဘူးထင္ပါတယ္။ သူမကေတာ့ေအာင္ျမင္ေနတဲ့အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ့္ တက္သစ္စအႏုပညာရွင္ေလးေတြကိုလည္း ေမာင္ႏွမအရင္းလိုလက္တြဲေခၚယူတတ္သူတစ္ေယာက္ပါ။ ပိုပိုကေတာ့ဘာသာတရားကိုလည္းကိုင္းရႈိင္းသလို အလႉေတြလည္းမၾကာခဏျပဳလုပ္တတ္ပါတယ္။ သူမကေတာ့ဒီေန႔သတင္းကြၽတ္လျပည့္ေနေလးကိုျမတ္စြာဘုရားေရွ႕ေမွာက္မွာ မဟာသမယသုတ္နဲ႔ဓမၼစၾကၤာ႐ြတ္ဖတ္ပူၿပီး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျဖတ္သန္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ဒီေန႔ေလးမွာပဲ အစ္မအရင္းတစ္ေယာက္လို႐ို႐ိုေသနဲ႔လာေရာက္ကန္ေတာ့ၾကတဲ့ အဆိုေတာ္ခ်ယ္ရီသင္းနဲ႔မိဖူးတို႔ေၾကာင့္ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ေနရေၾကာင္းသူမရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာပုံရိပ္ေတ ြနဲ႔အတူေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါပုံရိပ္ေလးေတြကိုေတာ့ “ခ်စ္ညီမခ်ယ္ရီသင္းနဲ႔ မိဖူးတို႔က လာကန္ေတာ့တာတဲ့သူ႔အမကို လိုအင္ဆႏၵမ်ားအားလုံးျပည့္စုံျပည့္ဝပါေစရွင့္ မႏွစ္က L … Read more
မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့ ဆေးလိပ်ဖြတ်တဲ့လက်ဆောင်ပြန်ပေးလို့ ဖေဖေကိုကျေးဇူးစကားဆိုလိုက်တဲ့ ယွန်းယွန်း
ယွန်းယွန်းဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အထူးရရှိခဲ့တဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင် မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ အပျိုဖားဖားဖြစ်ပြီး အရမ်းကို လှသွေးကြွယ်တဲ့ မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ ။ အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီး အနေအေးတဲ့ ယွန်းယွန်းက မိသားစုကို အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုတာ ပရိသတ်တွေလည်းသိပြီးဖြစ်မှာပါ ။ အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဌေးအောင်ရဲ့ မွေးနေ့မှာ Happy Birthday ဖေဖေ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ရသလိုပဲ တစ်နှစ်လုံးလဲပျော်ရွှင်ရပါစေ။ ဒီနှစ်မှာ မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့ ဆေးလိပ်ဖြတ်တဲ့လက်ဆောင်ပြန်ပေးလို့လဲ ကျေးဇူးပါ ကျန်းကျန်းမာမာ၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ သမီးအနားမှာ အသက်ရှည်ရှည်နေပေးပါ ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့ အတူ ဖခင်ဖြစ်သူ ကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့တာပါ ။ ယွန်းယွန်းရဲ့ချစ်ပရိသတ်ကြီးကလည်း ယွန်းယွန်းအဖေအတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေ တောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ် ။ Happy Birthday ပါ … Read more
အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပြီး ပြန်လည်ထိုးသတ်ကာမစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံခါးပတ်ကိုပြန်ယူမှာမို့ ပရိသတ်တွေအားလုံးမငိုကြွေးကြပါနဲ့တော့ဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆိုင်း
နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင်လက်ဝှေ့ချန်ပီယံတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အောင်လအန်ဆိုင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ(၃၀)ရက်နေ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံခါးပတ်ကာကွယ်ပွဲမှာ စိန်ခေါ်သူRienner De Ridderနဲ့ရင်ဆိုင်ထိုးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲအတွက်အောင်လအန်ဆိုင်းကအကောင်းဆုံးကြိုးစားလေ့ကျင့်ထားခဲ့ပေမယ့် မမျှော်လင့်ဘဲရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ပူနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း သူခုထိကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ရှိနေကြောင်း အကောင်းဆုံးလေးကျင့်ပြင်ဆင်ပြီး ပြန်လည်ထိုးသတ်ကာမစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံခါးပတ်ကိုပြန်လည်ရယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကိုအသိပေးပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။ အောင်လက”ကျွန်တော်နေကောင်းကျန်းမာပါတယ်၊ ကျွန်တော့်မိသားစုလည်းနေကောင်းကျန်းမာကြပါတယ်၊ ထို့အတူကျွန်တော့်အသင်းကလည်းကျွန်တော့်ကိုနောက်ကွယ်ကနေအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်ပါတယ်! ကျွန်တော်အသန်မာဆုံး၊အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့လေ့ကျင့်ပြင်ဆင် ပြန်လည်ရင်ဆိုင်ထိုးသတ်ပြီးတော့၊ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံခါးပတ်ကိုပြန်လည်အရယူမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်။ ဒီတော့ငိုကြွေးမနေပါနဲ့တော့”ဆိုပြီးရေးသားကာ သူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကိုအားပေးနှစ်သိပ့်စကားပြောထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Source:Aung La Nsang(Burmese Python) Zawgyi အေကာင္းဆုံးေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ၿပီး ျပန္လည္ထိုးသတ္ကာမစ္ဒယ္ဝိတ္တန္းခ်န္ပီယံခါးပတ္ကိုျပန္ယူမွာမို႔ ပရိသတ္ေတြအားလုံးမငိုေႂကြးၾကပါနဲ႔ေတာ့ဆိုတဲ့ ေအာင္လအန္ဆိုင္း ႏိုင္ငံဂုဏ္ေဆာင္လက္ေဝွ႔ခ်န္ပီယံတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေအာင္လအန္ဆိုင္းဟာၿပီးခဲ့တဲ့ေအာက္တိုဘာလ(၃၀)ရက္ေန႔ကစင္ကာပူႏိုင္ငံမွာက်င္းပတဲ့ မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္းခ်န္ပီယံခါးပတ္ကာကြယ္ပြဲမွာ စိန္ေခၚသူRienner De Ridderနဲ႔ရင္ဆိုင္ထိုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါပြဲအတြက္ေအာင္လအန္ဆိုင္းကအေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားေလ့က်င့္ထားခဲ့ေပမယ့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲရႈံးနိမ့္သြားခဲ့ပါတယ္။ စိတ္ပူေနၾကတဲ့ပရိသတ္ႀကီးအတြက္လည္း သူခုထိက်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ရွိေနေၾကာင္း အေကာင္းဆုံးေလးက်င့္ျပင္ဆင္ၿပီး ျပန္လည္ထိုးသတ္ကာမစ္ဒယ္ဝိတ္တန္းခ်န္ပီယံခါးပတ္ကိုျပန္လည္ရယူသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ပရိသတ္ေတြကိုအသိေပးေျပာၾကားလာခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္လက”ကြၽန္ေတာ္ေနေကာင္းက်န္းမာပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ့္မိသားစုလည္းေနေကာင္းက်န္းမာၾကပါတယ္၊ ထို႔အတူကြၽန္ေတာ့္အသင္းကလည္းကြၽန္ေတာ့္ကိုေနာက္ကြယ္ကေနအေကာင္းဆုံးေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကေကာင္းျမတ္ပါတယ္! ကြၽန္ေတာ္အသန္မာဆုံး၊အေကာင္းဆုံးပုံစံနဲ႔ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ ျပန္လည္ရင္ဆိုင္ထိုးသတ္ၿပီးေတာ့၊ မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္းခ်န္ပီယံခါးပတ္ကိုျပန္လည္အရယူမယ္လို႔ကတိေပးပါတယ္။ ဒီေတာ့ငိုေႂကြးမေနပါနဲ႔ေတာ့”ဆိုၿပီးေရးသားကာ သူအတြက္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးကိုအားေပးႏွစ္သိပ့္စကားေျပာထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒွေးရဲ့(၁၀)နှစ်ပြည့်အမှတ်တရပွဲမှာ ဒွေး ပန်းချီကား၁ချပ်ကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ပြန်လည်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မုဏ်း
ပန်းချီချစ်မြတ်နိုးသူတို့စုပေါင်းပြီး ကိုဗစ် ကာကွယ်ကုသရေးတွေမှာ လှူဒါန်းဖို့အတွက် ပန်းချီကားတွေ အလှူခံပြီး 3Color ပန်းချီပြခန်း Page ကနေတဆင့် လေလံတင်ရောင်းချလျက်ရှိပါတယ် ။ အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ ပန်းချီစိုးမိုး ၊ ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း ၊ မြင့်မိုးအောင် ၊ ဇော်ဝင်းထွဋ် (ဦးညီထွဋ်) ၊ အရိုး ၊ ဂျီလတ် ၊ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက် ၊ ကျားပေါက် ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် (အူဝဲ) ၊ ဆန်းထွဋ် ၊ ရဲတိုက် ၊ နှင်းဝတ်ရည်သောင်း ၊ ပိုင်တံခွန်နဲ့ ပြေသုဒြာ တို့ကလည်း ပါဝင်လှူဒါန်းထားကြပါသေးတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ ကွယ်လွန်သူ အကယ်ဒမီဒွေးရဲ့ (၁၀)နှစ်ပြည့်အမှတ်တရပွဲမှာ ဒွေး ပန်းချီလက်ရာ ကား၁ချပ်ကို ဝယ်ယူထားခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် … Read more
လူထုအခြေပြုပရဟိတအသင်းသို့ COVID-19 ကာကွယ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ငွေကျပ်(၂၂)သိန်းကိုလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း
ဖြူဖြူကျော်သိန်းဟာ အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့သီချင်းတွေကိုသီဆိုပြီး သူမရဲ့အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့သတိထားအားပေးခြင်းကိုခံနေရတဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ပါ။ ခံစားချက်အပြည်နဲ့သီဆိုထားတဲ့သူမရဲ့သီချင်းတိုင်းကလည်း လူငယ်တွေပါးစပ်ဖျားမှာနေရာအပြည့်ယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအနုပညာလောကမှာအောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့ပရိသတ်တွေအပေါ်မှာဟန်ဆောင်မှုမရှိဘဲဖော်ဖော်ရွေရွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံလေ့ရှိပါတယ်။ စိတ်သဘောထားဖြူစင်လှတဲ့အဆိုတော်ဖြူဖြူကျော်သိန်းက အလှူအတန်းဘက်မှာလည်းလက်မနှေးသလို လတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပါဝင်လှူဒါန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မြင့်မြတ်လှတဲ့သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေလေးမှာလည်း အမာခံပရိသတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့(၆)နှစ်ပြည့်အမှတ်တရအဖြစ် လူထုအခြေပြုပရဟိတအသင်းကို COVID-19 ကာကွယ်ကုသရေးအတွက်ငွေကျပ် ၂၂ သိန်းတိတိလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့အကြောင်း သူမကယခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ “ယနေ့အလှူဒီနေ့ကသီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ဖြစ်တဲ့အပြင် ဖြူ့အမာခံပရိသတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Diva’s Warriors ရဲ့ ၆နှစ်ပြည့်အမှတ်တရလည်းဖြစ်တာမို့ ဖြူဖြူတို့အတူစုပေါင်းပြီး#WeLove-Yangon လူထုအခြေပြုပရဟိတအသင်းကို COVID-19 ကာကွယ်ကုသရေးအတွက်ငွေကျပ်၂၂သိန်းတိတိလှူဒါန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်၆ နှစ်ပြည့်ကိုမင်္ဂလာလည်းရှိ၊ရည်ရွယ်ချက်လည်းကောင်းတဲ့အလှူဒါနအမှတ်တရနဲ့ပါဝင်ပေးကြတဲ့ Diva’s Warrior တစ်ယောက်စီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်”လို့ရေးသားကာအလှူပုံရိပ်လေးနဲ့အတူဖော်ပြပေးထားခဲ့တာမို့ ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ Source:Phyu Phyu Kyaw Thein Zawgyi လူထုအေျချပဳပရဟိတအသင္းသို႔ COVID-19 ကာကြယ္ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္(၂၂)သိန္းကိုလႉဒါန္းေပးခဲ့တဲ့ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းဟာ အသံပါဝါအားေကာင္းေကာင္းနဲ႔သီခ်င္းေတြကိုသီဆိုၿပီး သူမရဲ႕အမိုက္စားဖက္ရွင္ေလးေတြေၾကာင့္လည္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕သတိထားအားေပးျခင္းကိုခံေနရတဲ့ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ပါ။ ခံစားခ်က္အျပည္နဲ႔သီဆိုထားတဲ့သူမရဲ႕သီခ်င္းတိုင္းကလည္း လူငယ္ေတြပါးစပ္ဖ်ားမွာေနရာအျပည့္ယူထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။သူမဟာအႏုပညာေလာကမွာေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေနတဲ့အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ့္ ပရိသတ္ေတြအားလုံးနဲ႔ပရိသတ္ေတြအေပၚမွာဟန္ေဆာင္မႈမရွိဘဲေဖာ္ေဖာ္ေ႐ြေ႐ြနဲ႔ေျပာဆိုဆက္ဆံေလ့ရွိပါတယ္။ စိတ္သေဘာထားျဖဴစင္လွတဲ့အဆိုေတာ္ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းက အလႉအတန္းဘက္မွာလည္းလက္မေႏွးသလို လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနတဲ့ကိုဗစ္ေရာဂါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း … Read more